“AppBox” ဝန်ဆောင်မှုဟာ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းများကို မည်သည့်Androidဖုန်းမှာမဆို ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MPTဆင်းမ်ကဒ် အသုံးပြုသူများသာ ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူနိုင်မည်ဖြစ်။ “AppBox” ဝန်ဆောင်မှုအားစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် 8980သို့ ON (သို့) OK ဟုပေးပို့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုအားရယူထားမှသာ ဂိမ်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိ Download ဆွဲပြီးကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအားပယ်ဖျက်လိုပါက 8980သို့ App Stop ဟုစာတိုပေးပို့နိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၁၀၆သို့ဆက်သွယ်ခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
FAQ Appbox EN
What is Appbox?
Appbox is an Application with the Best high quality games for any Android phone.
From which channels I can access to Appbox service?
When using the service in the Application will be able to customize any game at any time for the start of service. "AppBox" 8980 App service reserved only to send games to be able to play unlimited download.
You will be charged 250 Ks / daily unless you cancel your subscription.
FAQ Appbox BUR
Appbox ဆိုတာ မည်သည့် Android ဖုန်းမှာမဆို အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေရရှိနိုင်တဲ့ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Appbox ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရရှိအသုံးပြုနိုင်မလဲ?
ဒီဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုချိန်မှစ၍ မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆို အပလီကေးရှင်းထဲမှာ အချိန်တိုင်းရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Appbox ဝန်ဆောင်မှုတွင် အကန့်အသတ်မရှိ အပလီကေးရှင်းတွေကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဂိမ်းများကိုလည်း အကန့်အသတ်မရှိ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ၂၅၀ ကျပ်ကို ဝန်ဆောင်မှုအား မပယ်ဖျတ်မချင်း နေ့စဉ် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်